घरको यस दिशामा लगाउनुहोस् गाईको तस्वीर, एकैचोटी मिल्छ ३३ कोटी देवताको कृपा – NepalajaMedia
February 15, 2021 430
काठमाडौँ । हिन्दुशास्त्रका अनुसार हरेक पशु,पन्छी कुन न कुनै देवी-देवतासँग सम्बन्धित हुन्छन्। यसकारण उनीहरुको पूजा गर्ने गरिन्छ। तर पूजा बाहेक पनि यी समस्त प्राणीको हाम्रो जीवनमा अर्को महत्वपूर्ण स्थान छ।
यस्तो मान्यता छ की यी सबै प्राणी हाम्रो जीवनबाट दुर्भाग्यलाई हटाएर सुख र समृद्ध लिएर ल्याउँछ। ज्योतिषी र वास्तुअनुसार कुन पशु र पन्छीको तस्वीर लगाउँदा लाभ मिल्न भन्ने बारे आज हामी जानकारी गराउँदै छौँ।
घरको कुन दिशामा कसको तस्वीर लगाउने ?
गाई-गाईमा ३३ कोटी देवी, देवताहरुको बास हुने मान्यता छ। त्यसकारण गाईको तस्वीर घर या पसलको मन्दिरको उत्तर,पुर्व दिशा पारेर लगाउनाले दुर्भाग्य नास हुन्छ।त्यस्तै गाइलाई लक्ष्मीको रुस पनि मानिने गरिएकाले उत्तर,पुर्व दिशा पारेर तस्वीर लगाउँदा धनको कम महशुस हुँदैन्।
कछुवा-कछुवा भगवान विष्णुको कच्छप अवतारको प्रतिक मानिन्छ। यसको तस्वीरलाई घरको भान्छाकोठा र पसलमा राख्नु शुभ मानिन्छ।
मयूर-मयूर कार्तिकेको बान हो। साथै यसको प्वाँख श्रीकृष्णलाई पनि प्रिय छ। यसलाई घर र पसलको दराजमा राख्नुहोस। पैसाको कमी हुदैन।
हात्ती-हात्ती भगवान गणेशको प्रतिक मानिन्छ। यसलाई श्रीमान,श्रीमतीको बेडरुम या पसलको पैसा राख्ने ठाउँमा सेतो हात्तिको तस्वीर राख्नु फाईदाजनक साबित हुन्छ।
माछा-माछा मत्स्य अवतारको कारण माछा विष्णुको प्रतिक मानिन्छ। यसको तस्बिर हल या पूजा घरमा राख्दा भाग्य वृद्धि हुन्छ।
Prevआज पनि घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् कति छ ?
Nextविनजयजंग नेपालगञ्जबाटै पक्राऊ गरिदै